Ndị na-emepụta China KLT-10000LED na ndị na-ebubata ya |Na-egbuke egbuke
Ngwa eji ebu ihe ọkara akpaaka
Ike mmanụ dizel
Ike mmanụ ụgbọala
Ngwakọta ọkụ Isi iyi
Mast akwụkwọ ntuziaka
Hydraulic Mast ● ọkụ ọkụ ● Ụlọ elu ọkụ
Ụlọ elu ọkụ mkpanaka arụpụtara kpọmkwem maka ngwa Ngwuputa.N'ihi ọkụ ọkụ 6X4000W LED ya, KLT-1000LED na-enye ikike na-enye ọkụ dị elu yana uru niile nke oriọna LED.Uru ndị ahụ gụnyere nkwụsi ike na mmezi dị ala n'ihi enweghị iko na ọkụ ọkụ.Nnukwu tankị mmanụ ọkụ na igwe na-eri mmanụ dị ala na-eme ka oge mmanụ ọkụ gafere ihe karịrị awa 90 iji.
Zitere anyị email Download akwụkwọ ntuziaka
Ụlọ elu ọkụ KLT-1000OLED
Onye njikwa dijitalụ
Ejiri KLT-1000LED nwere njikwa dijitalụ amụrụ kpọmkwem iji jikwaa ọrụ ọ bụla nke ụlọ elu ọkụ maka ịdị mfe iji.
Ọkụ ọkụ na-egbuke egbuke
6x400 W elu arụmọrụ LED floodlights mere site na Fuzhou Brighter Electromechanical Co, Ltd. Ihe nlereanya nke nwere ikike ọkụ kachasị elu nke oke dị ka nhọrọ, ọkụ ọkụ nwere ike iji 24 Volts mee ka ọ dịkwuo nchebe nke igwe.
Mast telescopic kwụ ọtọ nwere sistemu ebuli hydraulic yana ịdị elu kachasị nke 9 mita.
Họrọ ụdị injin nke masịrị gị n'etiti Kubota D1105 na D905.
Igwe ngwuputa ihe
Njirimara dị elu dị ka etiti ọrụ dị arọ, ụgbọala na-adọkpụ okporo ụzọ nhọrọ na ọkụ ọkụ na-agbaji LED na-eme ka ụlọ elu ọkụ KLT-100OLED bụrụ ihe nlereanya zuru oke maka gburugburu ebe siri ike dị ka ebe a na-egwupụta ihe.
1. Ị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ ịzụ ahịa?
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma na-emepụta ngwaahịa niile site n'onwe anyị.Nabata na ụlọ ọrụ anyị maka nyocha ụlọ mmepụta ihe.
2.Can anyị nwere Logo ma ọ bụ aha ụlọ ọrụ anyị ga-ebipụta na ngwaahịa ma ọ bụ ngwugwu gị?
Sure.Your Logo nwere ike ibipụta na ngwaahịa gị site na iji stampụ na-ekpo ọkụ, ibipụta akwụkwọ, na-embossing.
3.Kedu ka ị ga-esi bụrụ onye nnọchi anya anyị?
Ọ bụrụhaala na ị nwere akụrụngwa ahịa yana ikike ịme ọrụ ire ere, kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ site na iziga anyị ajụjụ.
4. Enwere m ike ịnweta usoro nlele maka ngwaahịa ụlọ elu ọkụ?
Ee, anyị na-anabata usoro nlele iji nwalee ma lelee ogo.A na-anabata ihe atụ agwakọtara.
Ka ịhụ ma ọ bụ ịtụ KLT-10000LED, kpọọ 86.0591.22071372 ma ọ bụ gaa na www.worldbrighter com
Akụkụ kacha nta 3400×1580×2360mm
Akụkụ kachasị 3400×1850×8500mm
Ibu akọrọ 1960 n'arọ
Sistemụ ebuli Hydraulic
Ntughari mast 360°
Ike oriọna 6 × 400W
Ụdị oriọna Ikanam
Mkpokọta lumen 360000 lm
mpaghara ọkụ 6000
Injin Kubota D1105/V1505
Igwe jụrụ oyi Mmiri mmiri
Silinder (q.ty) 3
Ọsọ injin (50/60Hz) 1500/1800 rpm
Mpempe mmiri (110%) √
Nhọrọ (KVA / V / Hz) 8/220/50-8/240/60
oghere oghere (KVA / V / Hz) 3/220/50-3/240/60
Nrụgide ụda 67 dB(A) @7m
Iguzogide ọsọ ifufe 80km / h
Ike tankị 130l
Nke gara aga: KLT-10000V
Ụlọ elu Lighting Tower
Ụlọ elu Led Lighting
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Fuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd.
akwụkwọ akụkọ email
Nweta ozi-e site na Brighter.
Anyị agaghị ekekọrịta ma ọ bụ ree ozi kọntaktị gị.